Home Wararka Jubbaland oo fariin udirtay MW Farmaajo
Jubbaland oo fariin udirtay MW Farmaajo
Maamulka Jubbaland ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu soo farageliyo Khilaafka ka dhashay magacaabista Taliyaha Ciidamada xoogga qeybta 43-aad.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayad Aadan ayaa ugu baaqay Madaxweynaha in uu wax ka qabto Khilaafka taagan.
Waxaa uu sheegay in aan maanta loo baahneyn in uu khilaaf soo gala dhex galo Ciidamada xoogga qeybtooda 43-aad, Maadaama ay ku jiraan dagaisaal ka dhan ah dagaalyahanada Al-Shabaab.
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay in la xoojiyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Maamulka Jubbaland ayaa diiday taliyaha cusub in uu kasoo dego Magaalada Kismaayo oo uu ku yaalla Taliska ugu weyn qeybta 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed.
Previous articleTaliyihii Laga Soo celiyaya Kismaayo oo abaabul dagaal kawado Garbahaareey
Next articleDekaddaha Taliyaaniga iyo iyo Malta oo loo diiday Muhaajiriin inay ka degtaan
Dowlada Maraykanka Oo Imtixaankii ku riday Soomaali faradabadan.
Nin horay u dilay Nabadoon caan ahaa oo saakay la toogtay